हज समितिको सराहनीय कामः हजयात्रीहरु खुशी हुदैं यात्राको लागि प्रस्थान « Today Khabar
हज समितिको सराहनीय कामः हजयात्रीहरु खुशी हुदैं यात्राको लागि प्रस्थान
प्रकाशित ६ श्रावण २०७६, सोमबार ०८:४३
हुसेन : दुई दसकयता हज समितिकाे सर्वत्र तारिफ भइरहेकाे याे पहिलाे पटक हाे । समिति निकै सक्रिय भएर काम गरिरहेकाे सर्वत्र चर्चा भइरहेकाे छ ।
कश्मिरी मस्जिदमा हज हेल्प डेस्क राखिएकाे छ । यस्ताे नेपाली हजकाे इतिहासमै कहिल्यै भएकाे थिएन । हज समितिका अध्यक्ष, सदस्य र सल्लाकारहरू हाजी बसेकाे ठाउँ ठाउँमा पुगेर पटक पटक समस्याहरूकाे अबलाेकन र निरिक्षण गरिरहेका छन्, समस्याहरू पहिल्याएर समाधानकाे बाटाे खाेजेर हाजीहरूकाे कष्टलाई न्युन गरिरहेका छन् । यही चाहेका थिए वर्षाैंदेखि हाजीहरूले ।
हज समितिका अध्यक्ष, सदस्य, चिकित्सक र सल्लाहकारहरू युनिफर्ममा निरन्तर हाजीहरूकाे सेवामा खटिएका छन् । काठमाडाैंमा कश्मिरी र नेपाली जामे मस्जिद दुवै ठाउँमा हज समितिका सदस्यहरू युनिफर्ममा उपलब्ध छन् ।
दुईवटा मेडिकल क्याम्प लागेका छन् ~ * बीर अस्पतालकाे मेडिकल क्याम्प * केयर फाउण्डेशनकाे मेडिकल क्याम्प । बिहानदेखि बेलुका सम्म डाक्टर उपलब्ध छन् । सुगर समेत चेक गरिन्छ । सस्ताे दरकाे रेष्टुरेण्ट पनि उपलब्ध छ ।
इतिहासमै पहिलाेपटक फुल भ्याक्सिनेशनकाे व्यवस्था गरिएकाे छ । एयरपाेर्टभित्र बाेर्डिङ्ग एरिया र इमिग्रेशन एरिया समेतमा स्वयंसेवकहरू परिचालित भएका छन् । त्यहाँ हज समितिकाे समन्वयमा इकरा एजुकेशनल फाउण्डेशनका पदाधिकारीहरू स्वयंले निरन्तर सेवा दिइरहेका छन् । मुस्लिम अायाेगले पनि स्वयंसेवक परिचालन गरेकाे छ ।
हाजीहरूलाई बिदाई गर्न एयरपाेर्टमा गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, शहरी विकास मन्त्री, मुस्लिम अायाेगका अध्यक्ष, साउदी अरबका राजदूत, संयुक्त अरब इमिरेट्सका राजदूत र पूर्वमन्त्रीहरू अाउनुभएकाे थियाे । यति धेरै संख्यामा विशिष्ट व्यक्तिहरूकाे उपस्थितिले नेपाली मुस्लिम समुदायकाे पहिचानलाई, उसकाे संस्कृतिलाई मजबुत तुल्याउँछ । मुस्लिम देशका र खास गरी साउदी अरबका राजदूत एयरपाेर्ट अाएर हाजीहरूलाई बिदाई गर्नुले नेपालसँगकाे कुटनीतिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएकाे छ । महामहिम राजदूतले अागामी वर्ष हजकाे काेटा बढाउने प्रतिबध्दता पनि जाहेर गर्नुभयाे ।
मक्का पुगेका हाजीहरूले इतिहासमै यति राम्राे व्यवस्थापन नभएकाे प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यहाँ पनि समितिका अध्यक्ष, सदस्य, डाक्टर र स्वयंसेवकहरू दैनिक रूपमा हाजीहरूसँग नियमित घुलमिल भई काम गरिरहेका छन् । हाजीहरू र समितिबीच निकै राम्राे समबन्ध बिस्तार भएकाे छ ।
हज समितिले जे घाेषणा गरेकाे थियाे त्यही अनुसार सवै सुबिधा पाएर हाजीहरू निकै खुशी छन् । हज समितिका अध्यक्ष नियमित काेठाहरूमा पुगेर हाजीहरूकाे अबस्थाकाे जानकारी लिइरहेका छन् । यसपालि पहिलेकाे भन्दा नजिकमा र पहिलेकाे भन्दा निकै राम्राे घर छ । नजिक पनि छ ।
पयाकिङ्ग खाना गनाउने भएकाेले बुफे सिस्टममा नेपाली स्वादकाे ताजा खाना उपलब्ध छ । साउदी सरकारले स्थानीय यातायात खर्चमा १५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी वृध्दि गरेकाेले र पाेहाेरकाे भन्दा साउदी रियालकाे दर बढेकाेले प्रति व्यक्ति रू. ५०००/- बढेर जम्मा रू. २० हजारभन्दा पनि बढी खर्च वृध्दि भएर हाजीहरूले यस वर्ष २३०,०००/- तिर्नु बाध्यता हाे । याे वृध्दि संसारभरिका हाजीहरूका लागि भएकाे हाे । यति कुरा याद राखाैं संसारमै सबभन्दा कम खर्च नेपाली हाजीकाे रहेकाे छ । याे धेरै महंगाे दर हाेइन ।
हज समितिकाे पूर्व घाेषणा अनुसार गुणस्तरीय सेवाकाे विषयमा हज समिति बटिबध्द देखिन्छ । सवै काम सिस्टमेटिक भइरहेकाे छ । केही उछृङ्खल तत्वहरू पटक पटक मस्जिदमा पुगेर भाँड्न खाेजेका छन । तर, हज समितिका सदस्यहरू धैर्यतासाथ नम्र शैलीमा उनीहरूकाे षडयन्त्रलाई निस्तेज गर्न सक्षमता प्रदर्शन गरेका छन् ।